ကုလားဘယာကြော်သုတ် (သက်သတ်လွတ်) easy cook | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ကုလားဘယာကြော်သုတ် (သက်သတ်လွတ်) easy cook
ကုလားဘယာကြော်သုတ် (သက်သတ်လွတ်) easy cook
Posted by weiwei on Sep 10, 2011 in Food, Drink & Recipes | 21 comments
၀ါတွင်းသတ်သတ်လွတ်စားတဲ့ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက် အိမ်ကိုလာလည်ကြမယ်ဆိုတော့ ဘာချက်ကျွေးရကောင်းမလဲ ခေါင်းစားရပါတယ်။ လက်စွမ်းလဲပြချင်သေးတာနဲ့ နဲနဲအလုပ်ရှုပ်တဲ့ အိမ်တွေမှာ လုပ်စားလေ့မရှိတဲ့ ကုလားဘယာကြော်သုတ် လုပ်ကျွေးဖို့ စိတ်ကူးပြီး လိုအပ်တာတွေ ၀ယ်ခြမ်းပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ် … အသေးစိတ်တစ်ခုချင်း အဆင့်ဆင့်ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ အချိန်မရတာကြောင့် အားလုံးပြီးမှပဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖြစ်ပါတယ် … လုပ်နည်းကို စာနဲ့ပဲ ရေးပြတော့မယ် …
ဘယာကြော် အတွက် ရယ်ဒီမိတ် မွှေးတံဆိပ် ဘယာကြော်မှုန့်ကို ရေအနည်းငယ်ဖြင့် တစ်နာရီခန့်စိမ်ထားပြီး ဆား၊ ကန်စွန်းရွက်နဲ့ကြက်သွန်နီရိတ်ရိတ်လှီး ထည့်နယ်ပြီး ဆီများများနဲ့ကြော်ပါတယ်။
ဆမူဆာကြော် အတွက် ဆမူဆာအရွက်ကို ရယ်ဒီမိတ် citymart က ၀ယ်ပါတယ်။ အတွင်းအစာအတွက် အာလူးပြုတ်ပြီး ခပ်သေးသေးလှီး၊ ကြက်သွန်နီခပ်သေးသေးလှီးပြီး ငရုတ်သီးစိမ်းလှီး ဆီနဲနဲဖြင့် ကြော်ပြီး မဆလာဖြူးထားပါတယ်။ အေးတော့မှ အရွက်ထဲထည့်ပြီး ဆမူဆာ (သုံးဖက်ချွန်) ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး ဆီများများနဲ့ထည့်ကြော်ပါတယ်။
ပဲပြုတ် ဖို့အတွက် ဆင်ခေါင်းပဲကို တစ်ရက်ကြိုရေစိမ်ထားပြီး ပြုတ်ပါတယ်။
အာလူးပြုတ် ထားတာနဲနဲကိုလည်း ဆား ဆနွင်း မဆလာနယ်ထားပြီး တစ်ပန်းကန်လုပ်ထားပါတယ်။
ပဲဟင်းရည် အတွက် ပဲမှုန့်အစိမ်းအနည်းငယ်ကို ရေများများဖြင့်ဖျော်ပြီး ပွက်ပွက်ဆူအောင်တည်ပါတယ်။ ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက်နဲ့ သစ်ကျားပိုးခေါက် ဆီသတ်ပြီး ပဲအိုးထဲထည့်တယ်။ ဆားနဲ့ မဆလာအနဲငယ်ထည့်ပြီး တည်ပါတယ်။
ဘယာကြော်၊ ဆမူဆာတို့ကို ပန်းကန်ထဲညှပ်ထည့်မယ်။ ပဲ၊ အာလူး၊ ဂေါ်ဖီ၊ မန်ကျီးနှစ်၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ မဆလာမှုန့်၊ ပူစီနံထည့်ပြီး ပဲရည်ပူပူဆမ်းစားရုံပါပဲ … ပေါ့နေသေးရင် ဆားထပ်ထည့်မယ်။ အရမ်းစပ်တာကြိုက်ရင်တော့ ငရုတ်သီးစိမ်းပါ ကိုက်စားလိုက်ပါ …
ကုလားရောင်းသလောက် အရသာမကောင်းပေမယ့် ကိုယ်တိုင်ချက်ဖြစ်လို့ အားရပါးရနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စားသောက်ရတာ ကျေနပ်ပီတိဖြစ်ရပါတယ် …
မမဝေ ရေ စားကောင်းမှာပါ။မနာလိုတောင်ဖြစ်မိပါတယ်။
ပျဉ်းတော်သိမ်ဆိုလို့.. ဗမာတယောက် မြန်မာပြည်က မျိုးမှာပြီး.. အယ်လ်အေမှာအပင်ပေါက်လေးတွေ စိုက်ရောင်းနေတာ တွေ့ဖူးတယ်.။
ebay မှာတင်ရောင်းရင်.. အပင်ပေါက်တပင်ဒေါ်လာ၂၀-၃၀ရတယ်တဲ့..။
အဲဒါက.. အခုလိုပဲဟင်းရည်မှာ မပါရင်ဘယ်လိုမှ အနံ့အရသာ မပြည့်စုံတာဆိုတော့..ကုလားစာကြိုက်သူတွေအတွက်.. မရှိမဖြစ် လိုအပ်တာတခုပဲ..။
ရန်ကုန်မှာနေတုံး… လမ်းဘေးဆိုင်လေးတွေ.. လှည့်စားခဲ့တာ သတိရမိပါရဲ့..။
ဆမူစာသုတ်..။ ဗယာကြော်သုတ်.. ကုလားပဲသုတ်..။ ကြက်ခြေထောက်သုတ်..။
ကျွန်မတို့ နယ်ကအိမ်မှာတော့ ပျဉ်းတော်သိမ်ပင်၊ ရှောက်ပင်၊ သံပုရာပင်နဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းကို အချိန်မရွေးခူးစားလို့ရအောင် စိုက်ထားတယ် …
ရန်ကုန်တိုက်ခန်းမှာနေတော့ ဘာမဆို ၀ယ်ချက်ရတာ အရမ်းနှမြောမိတယ် … အခုခေတ်က ဘာဝယ်ဝယ် အနဲဆုံး ၁၀၀ ဖိုးဝယ်မှ …
အနော်တို့ဆီမှာ ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက် လက်တဝါးစာ (ကွမ်းရွက်ဆိုက်) ပလပ်စတစ်အိပ်ပါး (မပြည့်) ကို ၁ဒေါ်လာရှိပါတယ်။ အရွက်အားဖြင့် ၂၀လောက်တော့ပါမယ်။ ကုလားပဲဟင်းချက်၊ ဆိတ်သားဟင်းချက်ရင်သုံးပါတယ်။ မဝေရေးတာကြည့်ပြီး စားချင်ပေမဲ့ ကိုယ့်အရည်အချင်း ကိုယ်သိလို့ အမြင်အာရုံနဲ့ ကျေနပ်လိုက်ပါတယ်။
လေးစားလောက်ပါတယ် မဝေေ၀…စာပေအရေးအသားကောင်းယုံတင်ကပဲ အစားအစာလည်းစုံလင်အောင်ချက်ပြုတ်စီမံတတ်တာပဲ။အင်း…လောလောဆယ်တော့ ပုံကြည့်ပြီးဗိုက်ဆာလာလို့ ကုလားမ ဘယာကြော်ပဲဝယ်စားလိုက်တော့မယ်..
ဝေဝေ့ကို တရုတ်အစားအစာတင် ရတယ်ထင်ထားတာ။ ခုတော့ ကုလားစာပါ ရတယ်ပေါ့။
ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်ပါ … တစ်ခုမှတော့ မကျွမ်းကျင်ဘူး … ကျွန်မတို့အိမ်က ဆိုင်မှာဝယ်စားတတ်တဲ့ အလေ့အထသိပ်မရှိလို့ ဘာမဆို အိမ်မှာပဲဖြစ်အောင်လုပ်စားတာ အကျင့်ပါနေလို့ … ဒီနေ့ညနေက မတ်ပဲကြော်ကြော်တာ ရေများပြီး ပျော့စိကုန်လို့ အကွင်းမဖြစ်ပဲ အလုံးတွေဖြစ်သွားတာကို ဖေဖေက ဆူတယ် ဒါလေးတောင် အသုံးမကျဘူးလားတဲ့ ….
ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ မဝေတယောက် မှီ့အိမ် အလည်လာစဉ်က မယ်လမင်း ပန်းကန်လေးတွေ ဌါးသွားသေးလား။ တူလွန်းလို့ပါ။ သား တနှစ်ခွဲလောက်က မှီလည်း ငတ်ငတ်နဲ့ ထမင်းမစားပဲ တနေကုန် အဲ့ဒါပဲ ငရုပ်သီး စပ်စပ်စားတာ သားကလည်း နို့စို့တုန်းမို့ သားအမိနှစ်ယောက် သွေးဝမ်းတွေ သွားလို့ မနည်း ကုရတယ် ဟီး..ငတ်တာလေ။ အခုတော့ မစားရလို့ အမိန့်ထုတ်ခံထား ရလို့ မျက်စေ့နဲ့ပဲ စားသွားပါတယ် မဝေရေ။
မဆလာ နံ့ လေး သင်းလာတယ်
ရန်ကုန် မဂိုဗလီအောက်ဘလောက် နား ကို ပြန်သတိရသွားသလို ပဲ
နောက်တစ်ခါ ရောက်လို့ 
ဂေဇက် က အန်တီဝေ ကို သတိရနေတော့မှာ
ဘယာကြော်တွေကို ဘေးဘယာ တွေ ကျော်သွားအောင် ယတြာချေတဲ့ အနေနဲ့ ဘုန်းကြီး လှူတာ ဘုရားဆွမ်းတော်တင်တာ လုပ်ကြတယ်။
ဘယာကြော်ကိုတော့ အိမ်မှာ လုပ်မစားချင်ဘူး မဝေ လုပ်တာပဲ စားချင်တယ်။ အဟိ..
ဘေးဘယာတွေ ကျော်လွားသွားအောင် နောက်တခါ လုပ်ရင် ပြောနော်… ကုသိုလ်ရအောင် လာစားပေးချင်လို့.. ဟိဟိ.. စေတနာ ထားတာပါ.. စားချင်လို့ မဟုတ်ဘူး။
ကျနော်က အစားကြီးတော့ ဒီလောက်နဲ့တော့ မ၀လောက်ဘူး မဝေရေ။
စမူဆာကရော ဘာအတွက်ပါလိမ့် ဆမူးမူးရေ………………..
စာရေးတဲ့ လူဆိုတော့ စာမူ လိုတယ်လေ..
ဆာ ရင် တောင်းတယ် မလား..
ဒီတော့ စာမူဆာ ဆိုတော့.. စာမူများများ အတောင်းခံရရင် မကောင်းဘူးလား ကိုပေါက်ရေ..
ဆင်ခေါင်းပဲပြုတ် ဆိုတာ ကုလားပဲလုံးကို ပြုတ်တာလား၊
သိမ်ဖြူ လမ်း စိတ်တိုင်းကျ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာရတဲ့ ပဲလိပ်သုတ် လုပ်နည်းရရင်လည်းထည့်ပေးပါနော်၊
ကုလားပဲလုံးကို ဆင်းခေါင်းပဲလို့ ခေါ်တယ်လို့ သူငယ်ချင်းကပြောဖူးလို့ …
ပဲလိပ်သုတ်တာ မစားဘူးလို့ မသိသေးဘူး မပဒုမ္မာ …
အရသာဆန်းပြီး လုပ်နည်းလွယ်တာလေး စဉ်းစားမိရင် တင်ပေးပါအုန်းမယ် …
သူများတွေ စားစရာအကြောင်း ရေးနေတဲ့အထဲမှာ ရယ်စရာ ၀င်ရေးပါရစေ
ဘရာကြော်သုတ်ကို စကားလိမ်နဲ့ ပြောတာ
ကျော်သာ ဆိုတဲ့ လူကို အမြဲ စ နေကျ စကားလုံးလေးပါ
ယခင်က လမ်းဘေးမှာ ဘယာကြော်သုတ် ဆိုင်တွေ ခေတ်စားခဲ့ပါတယ်
လက်ပူမှာ စိုးတဲ့လူတွေက မှာတဲ့အခါ ဒိုးပလိပ် လို့ မှာရင် လက်ပူသက်သာအောင် ပန်းကန် ၂ထပ် လုပ်ပေးတယ် .. ဒီအတိုင်းမှာရင် မထပ်ပေးတော့ ပဲဟင်းပူပူကြောင့် လက်ပူတာကိုး
စားချင်လိုက်တာ… အိမ်လာလည်ရမှာလားဟင်။ အဲလိုလာရင် လုပ်ကျွေးမယ်မလား…. ဟီး ရှလရွတ်…
တရုတ်ပြည်လိုက်စားမှပဲ ရတော့မယ် ….
Just to share , one of the road side shop at 8 mile junction , one lady selling and she said she been selling for 25 years. Quite good .